35 Siyaabood oo Hubaal ah oo lagu sameeyo 200 oo Doollar Maalin kasta 2022 -ka - The Circle Wealth
Bogga ugu weyn 35 Siyaabo Hubaal ah oo lagu sameeyo 200 oo Doollar Maalin kasta 2022 -ka
35 Siyaabo Hubaal ah oo lagu sameeyo 200 oo Doollar Maalin kasta 2022 -ka
Waxaan ku dabaqay hal xirfad oo kaliya 35 siyaabood oo la hubo oo aan ku kasbado oo aan ku kasbado 200 oo doollar maalin kasta waxaan sameeyay wax ka badan intii aan filayay. Isku soo duuduuboo, waxaan bixiyay biilkayga oo waxaan haystay xoogaa lacag ah oo dheeri ah oo aan ku ciyaaro.
Marka, haddii aad hadda ku sugan tahay xaalad aad u baahan tahay inaad xoogaa xoogaa lacag ah ku samayso, waxaan kaa baryayaa inaad fadhiisato oo aad nasato intaad dhex marayso qaybtan weyn ee hubaal ah oo aad ku samayn karto 200 oo doollar maalin kasta.
Waa kuwan 35 siyaabood oo la hubo oo aad maalin walba ku samayn karto 200 oo doollar:
Ku wad Uber
Baabuurkaaga kor u kiree
Ku Iibi Alaabta Craigslist
Qor Qol ku yaal Gurigaaga
Hayso Yard Sale
Ku samee Gigs liiska Craigslist
Samee Shaqooyinka Kombiyuutarka
Samee Handyman Work
Raadi Shaqooyinka Rinjiyeynta
Guryo Nadiif ah
Maydhista Baabuurka maalmaha fasaxa ah
Samee shaqooyinka makaanikada
Samee hawlaha Fiverr
Ka qaybqaado Daraasaadka Cilmi -baarista
Caawi Dadka Ka saar Qashinka
Samee Dayactirka Guriga
Kiro Meel Kaydinta
Noqo Kaaliye Xisbi
Shaqooyinka Nadiifinta Guga ama Dayrta
Ka caawi Qurxinta
Dhaqaaji Alaabta Guriga
Noqo Tijaabiye Website
#1 Ku wad Uber
Ma haysataa baabuur? Kaliya maahan baabuur kasta, baabuur hagaagsan oo buuxiyay u -qalmitaanka ugu yar si uu ugu qalmo Uber?
Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, uma baahnid inaad mar kale isticmaasho 'jebinta' ama 'biilka gadaashiisa'. Miyaad taqaanaa in dadku lacag badan ku kaxeeyaan dadka kale?
Adduunku aad buu u horumaray oo dadku hadda waxay doorbidaan adeegsiga dhowr adeegyo gaadiid oo ah moobiil sida Uber marka loo eego taksi caadi ah. Wadista dadka hareeraheeda waa mid ka mid ah siyaabaha la hubo ee lagu sameeyo 200 oo doolar maalin kasta.
Waxaan leeyahay saaxiib ay ahayd inuu ka tago shaqadiisa-cad-cad si uu ugu weyneeyo dadka ku dhex wado isticmaalka app uber.
Si aad u bilowdo lacag u samaynta darawalka Uber ahaan, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa ka hubi abka xidhiidhka hoose ee lagu bixiyay si aad u aragto u-qalmitaanka loo baahan yahay. Haddii aad haysato baabuur buuxiya shuruudaha loo dejiyay, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ka faa'iidaysato fursadda oo aad ku macsalaamayso jab.
#2 Baabuurkaaga u kireeyso
Tani waa hab kale oo la hubo oo ah in maalin kasta la sameeyo lacago dheeraad ah. Habkani waxaa laga yaabaa inuusan kuu keenin qiyaasta qiyaasta $ 200 maalin kasta laakiin waxaa hubaal ah inay soo qaadan doonto xoogaa lacag ah oo dheeraad ah si aad u daboosho kharashyada qaarkood.
Miyaad leedahay baabuur aan daruuri u baahnayn inaad maalin walba raacdo? Haddaad sidaas samayso waa inaad ka fekertaa inaad lacag ka samaysato baabuurka.
Haddii aadan doonayn inaad ku kaxayso Uber ama adeegyo kale oo gaadiid, kiraynta baabuurkaaga ayaa laga yaabaa inay tahay xulasho xikmad leh inaad tixgeliso. Halkii aad u oggolaan lahayd in gaarigaagu jiifsado garaashkaaga oo aan la adeegsan, waxaan u malaynayaa inaad gasho goobo sida Craigslist oo aad ku qorto baabuurkaaga kiro waxaadna la yaabi doontaa inta aad ka maqnayd.
#3 Ku Iibi Alaabta Craigslist
Ma haysaa shay aad dareemayso inaanay waxba kuu tarayn? Waa inaad tixgelisaa inaad ku iibiso aaladaha sida Craigslist. Haddii aadan dareensaneyn inaad dhex marayso culeyska sameynta garaash iibinta, waxaan kaa codsanayaa inaad tixgeliso inaad internetka gasho si aad wax u iibiso.
Ma haysataa dhar ama waxyaabo kale sida CD -yada ama DVD -yada aadan u baahnayn? Waxaad ka fekereysaa iibinta qaar ka mid ah kuwa. Waxaa jira dad aad u badan oo halkaas ka heli kara alaabtan oo waxtar leh oo diyaar u ah inay bixiyaan si ay u haystaan. Waxaad ka heli kartaa dadka sidan oo kale ah bogagga sida craigslist.
Si kastaba ha noqotee, si aad alaabtaada ugu iibiso liiska craigslist, waxaad u baahan doontaa inaad shaqaaleysiiso xoogaa xeelado suuq -geyn wanaagsan ah sida liisaska qiimeynta tixgelinta leh ee alaabtaada iyo sidoo kale dhisidda sharraxaad soo jiidasho leh.
Waa inaad siisaa macaamiisha suurtagalka ah sababaha ay uga doorbidaan alaabtaada kuwa kula tartamaya. Ka gal Craigslist adoo adeegsanaya mareegaha hoose si aad isu diiwaangeliso oo aad u qorto alaabtaada. Goobtu gebi ahaanba waa lacag la'aan.
#4 Noqo Qof Xor u ah
Sameynta shaqada madax -bannaanida waa mid ka mid ah siyaabaha la hubo ee lagu sameeyo 200 oo doollar maalin kasta. Mid ka mid ah wax wanaagsan oo ku saabsan noqoshada madax -bannaanida ayaa ah inaad adigu noqoto maamulahaaga oo aad wax ku qabato xawaarahaaga, in kasta oo laga yaabo inaad rabto inaad hubiso inaad la kulanto u -gudbinta shaqooyinka macaamiishaada goor hore.
Ma tahay qof hal -abuur leh? Ma ku fiican tahay qorista? Ma taqaanaa sida loo sameeyo bogag internet? Ma ku fiican tahay naqshadeynta garaafyada? Waa maxay xirfadaha la iibin karo ayaad u malaynaysaa inaad ku fiican tahay?
Tusaale ahaan, waxaan sameeyaa lacago dheeri ah anigoo u qora blogyada caanka ah waqtigayga firaaqada ah.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad fadhiisato oo aad naftaada ka fikirto.
Isku day inaad garato waxa aad ku fiican tahay oo dadku dhab ahaantii lacag kugu siin karaan, ka dibna internetka u gal goobaha sida www.upwork.com si aad u xayeysiiso kartidaada. Waxaan qiyaasayaa inaad la yaabi doonto inta dadku diyaar u yihiin inay ku bixiyaan hibadaada.
Dhanka kale, waxaad dareemeysaa inaadan haysan wax xirfado ah oo la iibin karo hadda, waxaan kugu boorinayaa inaad maanta barato xirfadaha qaar. Gal online ama dibadda xaafaddaada, la xiriir dadka oo waxaad arki doontaa inay yihiin kuwa ku sugaya inay ku caawiyaan iyagoo ku bara xirfado ay ka mid yihiin horumarinta shabakadaha, naqshadeynta sawirada iyo kuwa kale.
Sidoo kale, waxaad xirfadahan ku baran kartaa heer la kabo oo aad internetka gasho si aad lacag u samayso.
#5 Guryaha Marxaladda
Milkiilayaasha gurigu inta badan waxay rabaan guryahoodu inay u ekaadaan sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, qaarna waxay diyaar u yihiin inay lacag fiican siiyaan qof kasta oo raba inuu ka caawiyo sidii ay u hagaajin lahaayeen guryahooda. Realtors sidoo kale waxay isticmaalaan adeegyada jaranjarooyinka guriga si ay guryaha hoostooda ugu eegaan kuwa wanaagsan.
Mulkiileyaashan Guryaha ah iyo kuwa wax kireystay waxay siiyaan lacag aad u wanaagsan shirkadaha la -talinta guryaha ee dajinaya. Marka tani waa mid ka mid ah siyaabaha la hubo ee lagu sameeyo 200 oo doolar maalin kasta.
Bal qiyaas inaad yeelato shirkad yar oo la -talin ah oo bishiiba mar 10–20 guri ku samaysa?
Markaa, waxaan kaa baryayaa inaad gasho daboolka fikirkaaga oo aad si dhab ah uga fikirto ikhtiyaarka Guryaha Marxaladda.
#6 Qor Qol ku yaal Gurigaaga
Ma ku leedahay qol bannaan gurigaaga? Ama malaha kondho oo hadda bannaan? Hadday haa tahay, markaa waxaan ku sharraxayaa inaadan garanayn inta lacag ah ee kaa maqnayd.
Ma maqashay Airbnb? Waxaa laga yaabaa inaad lahaan lahayd laakiin weligaa ha ka fikirin inaad wax badan ka barato mareegaha. Airbnb waa madal kuu ogolaanaysa inaad qol ka samaysato gurigaaga ama guri banaan oo kirada dadka socotada ah ay ku sugnaadaan muddo gaaban ama wakhti lagu heshiiyey.
Madalkan waxaa la aasaasay qiyaastii toban sano ka hor tan iyo markaasna wuxuu caan ku noqday in ka badan 200 milyan oo marti ah.
Waxa ay tahay inaad ogaato ayaa ah in dad badani ay hadda doorbidaan inay kiraystaan ​​guri gaar loo leeyahay iyada oo aan muusigga sare iyo jumladaha laga heli karin meelaha sida hoteellada iyo hoteellada, sidaa darteed haddii aad qol leedahay qofna hadda ma deggana oo waxaad u baahan tahay inaad lacag degdeg ah ku samayso, adiga waa inay tixgeliyaan booqashada mareegaha si ay u taxaan qolkaaga.
Adiguna kama cabsanaysid waxyeello u geysan karta guryahaaga martidaan maadaama Airbnb uu si buuxda u caymis yahay oo uu qaadi doono mas'uuliyadda wixii waxyeelo ah ee soo gaara gurigaaga.
#7 Hayso Yard Yard
Waa inaad maqashay dad waxoogaa lacag ah ka samaynaya iibinta dayrka? Ama laga yaabee inaad hore u iibisay dayrka. Nidaamkan lacag samaynta ayay u badan tahay inuusan mar dhow ka bixi doonin moodada.
Waxa aad hadda u baahan tahay inaad samayso waa inaad si fiican u eegto alaabtaada oo aad doorato waxyaabaha aad dareemayso inaanay muhiim kuu ahayn laakiin laga yaabo inay qiimo u leeyihiin kuwa kale. Alaabta sida dharka ama kombuyuutarrada aanad isticmaalin ayaa kuu keeni kara lacagta aad ka fikiraysay sidii aad ku heli lahayd.
#8 Geeya Raashinka
Waxaa jira shirkado badan oo kireysan doona si ay u gaarsiiyaan raashinka iyo alaabo kale. Waxaad samayn kartaa ilaa $200 maalintii oo aad u shaqeyso shirkadahaas haddii aad saacado badan geliso.
Waxaa jira mareegaha sida Instacart waad iska qori kartaa si aad u aragto dad diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad uga caawiso inay u keenaan raashinka. Yacni, waxaad farsamo ahaan u wadi lahayd war dadkaan oo hal sabab ama mid kale doorbidaya inaysan guryahooda ka bixin.
Sidoo kale, waad iska qori kartaa shirkadaha sida DoorDash .in laga caawiyo dadka inay gaarsiiyaan cuntooyinka. Waan jeclahay shaqada gudbinta xaqiiqda fudud ee ah inaan doorto saacadaha aan doonayo inaan shaqeeyo.
#9 Samee Gigs liiska Craigslist
Craigslist ayaa laga yaabaa inay tahay goobta shaqada ugu weyn adduunka oo malaayiin qof oo soo booqda maalin kasta. Haddii aad gasho www.craigslist.org waxaad arki lahayd qaybta 'gigs' oo aad ugu dhow qaybta shaqada. Halkaas waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada shaqooyinka hoose oo awood u leh inay lacag kuu soo qaataan maalin kasta.
Halkaas waxaad ka heli doontaa shaqooyin sida- dadka u baahan caawimaad si ay u guuraan, shaqooyinka rinjiyeynta, iyo shaqooyin kale. Fursadaha shaqo ee Craigslist waa kuwo aan xad lahayn, riwaayadaha qaarkood waxay kaa rabaan inaad soo gudbiso resume halka kuwa kale aysan soo booqan doonin goobta si aad lacag u bilowdo.
#10 Fadhiga Ilmaha
Ma jeceshahay carruurta? Shaqadani waxay ku habboon tahay marwooyinka. Haddii aad tahay marwo akhrinaysa qoraalkan oo aad u baahan tahay inaad dhaqso u samayso lacag, xannaanaynta ilmaha ayaa laga yaabaa inay tagto.
Waxaa jira waalidiin doonaya inay lacag ku siiyaan si aad u ilaaliso ilmahooda in muddo ah. Xannaanada caruurtu maaha wax cusub in kastoo dhalinyaro badan ay maskaxda ku hayaan in shaqadu tahay dadka da'da ah.
Waa hagaag, waan ku faraxsanahay inaan ku qarxiyo xumbo adiga oo daaha ka qaadaya - anigoo ah nin dhallinyaro ah, waxaan haystaa ilmo horay u fadhiistay cunug waxaanan kuu sheegayaa wax, waa hab wanaagsan oo lacag lagu sameeyo.
Haddii aad ka fekereyso arrintan oo aad ka fekereyso siyaabo aad ku heli karto dadka si ay u xanaaneeyaan caruurtooda, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad internetka ka raadiso maadaama ay jiraan goobo badan oo lagu helo dadka noocaas ah.
7 Siyaabood oo FUDUD AHAAN inaad hesho LAPTOP bilaash ah
13 Sahamin onlayn ah oo Lacag caddaan ah lagu bixiyo PayPal
11 lacag lagu siiyo fursadaha qoraalka Online
11 App App si aad lacag uga hesho mar kasta oo aad u baahato
#11 Fadhiga Xayawaanka
Kani waa ikhtiyaar la mid ah u -haynta ilmaha oo kaliya in markan agtaada ah aad ku xannaanayso xayawaan halkii beddel ilmo. Ma waxaad tahay qof jecel xayawaanka? Hadday haa tahay, waxaad ku fakartaa inaad samaysato xayawaan rabaayad ah marka aad lacag u baahan tahay.
Waxaa jira degello fara ku tiris ah oo aad iska qori karto si aad u aragto dadka raadinaya kuwa xayawaanka xanaaneeya. Fadhiga xayawaanku wuxuu soo qaadan karaa wax ka badan intaad malayn karto iyadoo ku xidhan hadba arrimo.
Booqo https://www.petsit.com si aad u aragto dad diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad u noqoto xanaaneeyaha xayawaanka.
#12 Samee Shaqooyinka Kombiyuutarka
Miyaad samayn kartaa dejinta kombiyuutarka ama dayactir? Haddii aad tahay qof ku xeel dheer tiknoolajiyadda waxaa laga yaabaa inaad ka fekerto inaad xirfad ka dhigato.
Waxaad igu raacsan tahay in shaqooyinka la xiriira kombiyuutarku ay u badan tahay inay noqdaan kuwo duugoobay waqti kasta oo aan kaa baryayo inaad ka faa'iidaysato suuqan kobcaya.
Haddii aadan lahayn xirfadda lagama maarmaanka u ah samaynta ama dayactirka kombiyuutarka, waxaan kaa codsanayaa inaad raadsato siyaabo aad ku baratid xirfadaha, lacag u bixisid haddii ay tahay inaad hubto inaad ku hesho soo -celin ballaadhan maalgashigaaga.
#13 Samee Gacan -Qabe Shaqee
Samaynta shaqo gacan -yare waa mid ka mid ah siyaabaha la hubo ee lagu sameeyo $ 200 maalin kasta. Ma ku fiican tahay rinjiyeynta? Miyaad taam u tahay inaad dadka ka caawiso inay dhaqaaqaan? Ma yihiin kuwo ku xeel dheer farshaxanka ururinta alaabta guriga? Haddii aad saxdo mid ka mid ah sanduuqyada kor ku xusan markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fekerto siyaabaha aad ku qaadan karto xoogaa lacag ah oo dheeraad ah oo aad ku qabato shaqada kaaliyaha waqtiga firaaqadaada.
Handy waa degel caan ah oo dadku iska diiwaangeliyaan si ay shaqooyin uga helaan agagaarka xaafaddooda. Markaad iska diiwaangeliso masraxa, waxay ku ogeysiinayaan shaqooyinka xaafadda waxaadna la gorgortamaysaa macmiilkaaga mustaqbalka. Markaad heshiis gaarto, waxaad u gudubtaa si aad shaqada u qabato oo mushaarkaaga si toos ah ayaa loogu shubaa koontadaada bangiga.
#14 Cawska cawska
Tani waa hal dariiqo oo lacag fiican lagu sameeyo. Dadku waxay had iyo jeer raadiyaan dad ka caawiya sidii ay u gooyn lahaayeen cawskooda oo ay u qurxin lahaayeen deegaankooda.
Markaa, si aad u hesho dadka diyaar u ah inay bixiyaan cawskooda si loo jaro, waa inaad ka fekertaa inaad xayeysiisyada dhigto goobaha sida craigslist. Kani waa hal dhinac oo wanaagsan oo awood u leh inuu lacag fiican ku helo maalin kasta.
#15 Raadi Shaqooyinka Rinjiyeynta
Shaqada rinjiyeynta waa wax ay tahay inaad tixgeliso haddii aad u baahan tahay inaad xoogaa xoogaa lacag ah samayso. Dadku had iyo jeer waxay raadiyaan rinjiilayaal badankooduna waxay diyaar u yihiin inay siiyaan qaddar wanaagsan ranjiilayaasha iskood u shaqeysta.
Waxaa jira shaqooyin rinjiyeyn waaweyn iyo kuwo yar yar agagaarkaaga oo waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad la xiriirto dadka oo aad ogeysiiso inaad shaqo fiican ku qaban karto rinjiyeynta.
Saaxiibkay ayaa mar ku biiray koox rinjiileyaal ah si uu u dayactiro hool weyn oo ku yaal xaafadeena oo muddo saddex maalmood gudahood ah, wuxuu ku sameeyay qiyaastii $ 1500 qaybtiisa shaqada.
Hadda, hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan rinjiyeynta ayaa ah inaysan kaaga baahnayn inaad si aad ah ugu xeel -dheeraato farshaxanka, marka labaadna, rinjiyeynta ma aha amar dheer oo la micno ah inaad si dhakhso leh wax u baran karto oo aad shaqada uga fiicnaan lahayd.
#16 Noqo Macallin
Waxbarista ma ku fiican tahay? Ma ku fiican tahay xisaabta ama maaddooyinka kale ee dugsiga? Hadday fiicantahay, markaa waxaa laga yaabaa inaad ka sii yaraato sidii aad ahaan lahayd. Miyaad lacag ku kasbataa internetka adoo dadka baraya?
Waa inaad tixgelisaa inaad iska diiwaangeliso websaydhyada sida Koorsada Koorsada si aad u gaarto dadka diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad u barato maadooyinka aad ku fiican tahay.
Sidoo kale, goobaha sida vipkids.com kugu xiriirin lahaa inaad barato carruurta Shiinaha. Tani waa hab fiican oo lacag lagu sameeyo maxaa yeelay waxaad dadka ka caawisaa sababta lacag isku mar loo sameeyo.
#17 Guryo Nadiif ah
Nadiifinta guryuhu waxay kuu soo jiidi karaan $ 200 maalintii taas oo ku xidhan nooca shaqada iyo saacadaha aad geliso. Waxaad lacag fiican ka heshaa nadiifinta guri weyn ama guryo yaryar oo badan.
Waxaa jira sababo badan oo ay dadku u fiiriyaan nadaafadda, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ku mashquulsan yihiin inay isku daraan culayska shaqada iyo nadaafadda halka kuwa kalena ay fiiriyaan nadiifinta guryaha ay hadda kiraysteen. Si kasta oo ay tahay xaalku, isku day inaad naftaada diyaar u ahaato oo aad la yaabto dakhligaaga.
#18 Baabuurka lagu dhaqo maalmaha fasaxa ah
In baabuurta loo dhaqo dadka maalmaha fasaxa ah ayaa laga yaabaa inay tahay hab lacag fiican lagu helo haddii aan si fiican looga fikirin. Maxaad ka qabtaa maalmaha fasaxaaga? Miyaad saaxiibbadaa iska gooftaa inta biilashaadu is ururinayaan?
Waxaad bilaabi kartaa meherad dhaqidda baabuurta guur -guura maalmaha fasaxa si aad u samaysato lacago dheeraad ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad hesho baaldi, saabuun, calal, iyo faaruq; oo waxaad u socotaa inaad lacag dheeraad ah samayso.
#19 Samee shaqooyinka makaanikada
Shaqooyinka farsamada ayaa dhab ahaantii ka mid ah siyaabaha la hubo ee lagu sameeyo 200 oo doolar maalin kasta. Haddii aad ku fiican tahay inaad qabato shaqooyin yar yar oo farsamo sida saliidda iyo is -beddelka shaandhada, markaa waxaad ku fiicantahay inaad sameyso $ 200 maalin kasta.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad raadiso qaybta gigs -ka ee ku jira liiska craigslist si aad u hesho dalabyo agagaarkaaga ah. Uma baahnid inaad noqoto makaanik waqti-buuxa ah si aad lacag uga hesho dayactirka baabuurka. Kaliya ogow aasaaska aasaasiga ah ee ku saabsan dayactirka baabuurka waxaadna samayn doontaa wax ka badan intii aad malaysay.
#20 Goobooyin Nadiif ah
Nadiifinta biyo mareennada saqafyada guryaha waa mid ka mid ah siyaabaha la hubo ee lagu sameeyo 200 doollar maalin kasta iyada oo ku xidhan inta guri ee aad nadiifinayso. Ma ku kalsoon tahay inaad kor ugu kacdo guryaha?
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad lacag uga samayso nadiifinta mareenada biyomareenka ah waxa ka mid ah jaranjarada, bacaha balaastiga ah ee aad ku ururinayso caleemaha soo dhacaya, iyo labo galoofyada sababo badbaado leh.
#21 Ku samee hawlaha Fiverr
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loo sameeyo $ 200 maalin kasta. Fiverr waa suuq online ah oo lagu siin karo lacag si aad u qabato hawlo dhowr ah.
Waxaan xoogaa xoogaa lacag ah ka helay Fiverr. Waxaan koonto ka furay mareegaha oo waxaan cusboonaysiiyay astaanteyda qoraa iyo dharab saacado kadib, boom! Waxaan gig ka helay qof u baahan qoraa, waan wada xaajoonnay oo waxaan sameeyay $ 300 maalintaas.
Waa kan sida ay ula shaqeyso Fiverr, marka hore waxaad koonto ka furtaa madasha iyo gobolka iyo waxa aad awood u leedahay inaad qabato sida qorista, horumarinta webka, naqshadeynta garaafyada, iwm Oo isla markiiba, waxaad bilaabi doontaa inaad dadka ka hesho dalabyo shaqo.
Fiverr -ka waxaa lagu siiyaa lacag dhan $ 5. Waxaad heli kartaa ilaa $ 50 si aad u dhammaystirto hawl.
Hadda qiyaasi inaad samayso afar ka mid ah shaqooyinka noocaas ah. Ku biir Fiverr hadda oo bilow lacag sameynta.
#22 Ka qaybqaado Daraasaadka Cilmi -baarista
Waxaa jira shirkado cilmi baaris oo diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad uga caawiso inay cilmi baaris sameeyaan ama ku biiraan koox cilmibaaris. Goob sida Shaqada goobta diyaar u yahay inuu ku siiyo bixinta fikirkaaga ku saabsan daraasadda qaarkood. Ku biir koox cilmi baaris ah oo lacag samee maanta.
#23 Caawi Dadka Ka saar Qashinka
Ma haysataa baabuur? Haddii aad haysato gaari xamuul ah waxaa laga yaabaa inaad weydo lacag sameynta. Ku dhawaad ​​guri walba wuxuu leeyahay qashin ay jeclaan lahaayeen in laga takhaluso. Haddii aad haysato gaari xamuul ah maalin walba lacag baad samayn kartaa adigoo ku wareegaya xaafaddaada si aad uga faa'iidaysato adeegyadaada dadka.
Dadka ogeysii inaad qashinkooda ku tuuri doonto xoogaa qaddar ah waxaadna la yaabi doontaa inta aad ka sameyneyso ka saaridda qashinka. Uma baahnid inaad tan si joogto ah u samayso, laga yaabee dhammaadka usbuuca oo aad hubaal tahay inaad ku qaadanayso lacag dheeraad ah maalmaha fasaxa.
#24 Samee Dayactirka Guriga
Samaynta qaar ka mid ah dayactirka guriga ee aasaasiga ah waxay awood u leedahay inay kuu soo qaadato $ 200 maalintii haddii aad geliso qadar saacado ah maalintii.
Waxaa jira mulkiilayaal badan oo agagaarkaaga ah oo raba inay dadka ka caawiyaan dayactirka qaarkood sida hagaajinta tubooyinka daadsan, nadiifinta dabinada bullaacadaha, ama taabashada gidaarada ilka leh. Tani waxay noqon kartaa hab lagu kasbado lacago dheeri ah.
#25 Kiro Meel Kaydinta
Dad badan kama fikiraan doorashadan inta badan. Meel dheeraad ah ma ku haysaa garaashkaaga? Waxaad kor ugu qaadi kartaa booskan kirada dadka raadinaya meel ay baabuurtooda dhigtaan. Sidaan hore u idhi, qaar badan ma siiyaan doorashadan tixgalin dhab ah.
Tag khadka tooska ah sida craigslist oo qor garaashkaaga iyo waxaad jeclaan lahayd dadka agagaarkaaga ah ee sugayay dalabkaas.
#26 Abaabul Guryaha
Tani waa fursad kale oo aan la jeclayn oo waxaad samayn kartaa ilaa 200 oo doolar maalin kasta haddii si wanaagsan looga faaiidaysto. Ma ku fiican tahay abaabulka guryaha? Waxaa jira dad diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad u timaadid oo aad u dejiso guryahooda xaalad wanaagsan. Dadka qaarkood waxay aad ugu mashquulsan yihiin inay isku daraan culayska shaqada iyo hawlaha guriga waxayna ku siin lahaayeen lacag fiican si aad uga caawiso sidii ay u hagaajin lahaayeen guryahooda.
Mar labaad, craigslist waa goob si aad u hesho dalabyo noocaas ah. Adeegso qaybta gig ee goobta si aad u hesho fursaddan oo kale.
#27 Noqo server
Shaqo u hel server ahaan. Tani waa shaqo kale oo mushahar fiican leh. Ka codso makhaayadaha iyo meelaha kale ee cuntada ama cabitaannada sida server oo lacag samee.
#28 Bixinta Pizza
Muhiimadda shaqooyinka gudbinta lama soo koobi karo sidoo kale lacagta qofku awoodo inuu sameeyo sidii nin wax gaarsiiya. Y
waxaad samayn kartaa lacag aad u fiican maalin kasta haddii aad u shaqayso sidii nin gaarsiin kara pizza. Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan bixinta pizza ayaa ah inaad macaamiisha ka hesho talooyin. Markaad isku darto talooyinkan xaddiga dhabta ah ee aad samayso, dakhligaagu wuxuu socon doonaa in ka badan $ 200 maalintii.
#29 Qor Resume
Ma ku fiican yihiin qorista resume? Tani waa hab wanaagsan oo lacag aad u badan lagu helo haddii aad tan samayn karto. Dadku waxay inta badan raadiyaan xirfadlayaal qoraayaal madax -bannaan si ay uga caawiyaan inay dhisaan resume.
Waxaad ku dallaci kartaa $ 50 - $ 100 resumey kasta oo aad dhisto. Hadda ka feker inaad qorto 3 illaa 4 maalin kasta.
Siyaabaha Kale ee La hubo ee Maalin kasta lagu sameeyo 200 oo Doolar waxaa ka mid ah;
30) Noqo Gigwalker
31) Noqo Kaaliye Xisbi
32) Shaqooyinka Nadiifinta Guga ama Dayrta
33) Ka caawi qurxinta
34) Dhaqaaji Alaabta Guriga
35) Noqo tijaabiye degel
Kuwani waa liiska kor ku xusan waxaa ka mid ah siyaabo la tijaabiyey oo la xaqiijiyey in la sameeyo $ 200 maalin kasta.
10 Siyaabood Oo La Xaqiijiyay Oo Ku Saabsan Sidii 300 Doollar Deg Deg Loogu Heli Lahaa
Sida Loo Bilaabo Meherad Nadiifin ah: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Lacagta Isboortiga: Halkee ka timaadaa iyo Halkee
Fiiri Faallooyinka (19)
Sida Lacag Loogu Siiyo Daawashada Filimada | Samee $ 1,000 Maalin kasta
Paypal ku wareejinta Alipay: Tilmaam Buuxa oo ku saabsan sida dhaqsaha ah ee Lacagta loo xawilo
Xawaalad caalami ah waxay noqon kartaa mid aad u adag in la rabo dariiqyo aan toos ahayn si loo sameeyo macaamil ganacsi. Paypal iyo Alipay…